नेपाली महिलाहरु बत्ति बालेर शा’रीरिक सम्बन्ध राख्न नचाहनुको कारण यस्तो ! - jagritikhabar.com – jagritikhabar.com
नेपाली महिलाहरु बत्ति बालेर शा’रीरिक सम्बन्ध राख्न नचाहनुको कारण यस्तो !
नेपालीहरु बत्ति बालेर तथा ना’ङ्गो भएर से’क्स गर्न चाहँदैनन् । यस विषयमा लामो समयको अनुसन्धान गरिरहेकी मनोविद् करुणा नेपाली यौ’न मनोविज्ञान जटिलतातर्फ उन्मुख हुँदै गएको स्वीकार गर्नुहुन्छ । नेपालीहरुको यौ’न ब्यवहार एवम् त्यसले सृजना गरिरहेको तनावले धेरै युगल जोडीहरुको वै’वाहिक सम्बन्ध टुट्दै गएको उनको अनुसन्धानले देखाएको छ । जर्मन मनोवैज्ञानिक दोरोभि वेनरकी खास शिष्या करुणासँग नेपालीहरुको यौ’न मनोविज्ञानका विषयमा कुराकानी गर्नुभएको थियो ।